Misy andiana mpanendaka mitondra môtô tonga manafika eny an-toerana miaraka amin’ny basy lava eo akaikin’ny fivarotana saribao iray. Ireo vazaha mivoaka alina sy mivezivezy amin’iny toerana iny no tena mahita faisana nkoatra ireo teratany malagasy efa sahirana nefa mbola mizaka ny tsy eran’ny ainy. Raha ny fitarainan’ireo olona efa sendra ireo jiolahy dia manao andiany tsiroaroa amin’ny môtô izy ireo. Mihaona amina toerana somary maizimaizina ry zalahy mialoha ny hanaovany ny asa ratsiny ary mifanome toromarika amin’ny finday rehefa misy haza kasainy hotratrarina. Fantatra ihany koa fa manao pataloha mitovy bika amin’ny an’ny mpitandro ny filaminana izy ireo ka mahatsiaro sahirana hatramin’ireo fiara voasakana. Misakana fiara ihany koa mantsy izy ireo. Manao antso avo amin’ny manampahefana rehetra ny mponina eny Isoraka sy ireo mpampiasa iny faritra iny mba hijery akaiky izany. Lohalaharana amin’ireny ireo manana toeram-pialamboly izay mihena isan’andro ny mpanjifany noho ny firongatry ny asan-jiolahy.